न्यूज सञ्जाल: » लकडाउनमा के के खुल्छन्, के छन् निषेधित ?
लकडाउनमा के के खुल्छन्, के छन् निषेधित ?
न्यूज सञ्जाल ११ चैत्र २०७६, मंगलवार ०८:१४
झापा । सरकारले आजदेखि एक सातासम्मका लागि देशलाई पूर्णरुपमा लकडाउन गर्ने निर्णय गरेसँगै बिहान ६ बजेदेखि १६ चैत बिहान ६ बजेसम्म सर्वसाधारणलाई घरबाट निस्किन नपाउने आदेश जारी गरिएको छ।
यस्ता छन् लकडाउनका आदेश :